Ogaden News Agency (ONA) – OYSU – Minnesotta iyo Shir lagaga hadlayo Arimaha Xuquuqda Aadanaha oo Mr. Graham Peebles uu ka qayb qaadan doono
OYSU – Minnesotta iyo Shir lagaga hadlayo Arimaha Xuquuqda Aadanaha oo Mr. Graham Peebles uu ka qayb qaadan doono
Posted by ONA Admin	/ March 15, 2014
Ururka Dhalinyarada iyo Ardayda Ogadenya OYSU faracaMinnesotawuxuu idiinku baaqayaa inaad kala soo qaybgashaan Shir balaadhan oo looga hadli doono arimaha Xuquuqul Insaanka oo uu ka hadli doono qoraaga caanka ah ee Graham Peebles.
Shirkan ayaa waxaa kala qayb-qaadanaya (cosponsored) Jaamacadda Sharciga ee Minnesotta (University of Minnesota Law School.)
Sidaad la socotaa Mr. Peebles waa qoraa fadhigiisu yahay Ingriiska oo wax badan ka qoray arimaha dagaalka ee ka socda Ogadenya. Wuxuu April 2013kii muddo todobaad ah booqasho ku joogay xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab halkaasoo uu kula kulmay qaar ka mid ahaa qaxootiga oo ay ka mid yihiin laba sarkaal oo ka soo baxsaday ciidanka hawaarinta (Liyu-Boolis) oo arima badan uu ka wareystay.
Waxaa intaa dheer, Mr. Graham Peebles waa madaxa Haya’adda Samafalka ee loo yaqaano The Create Trust oo fadhigeedu yahayUK. Wuxuu joogay Adisababa laba sano halkaasoo uu mashaariic waxbarashada caruurta yar yare e suuqyada jiifa uga sameeyay iyo barnaamijyo tabararidda macallinka ah. waxaa kaloo uu ka soo shaqeeyay Sri-Lanka,Palestineiyo markii ugu dambaysayIndia.
Wuxuu wadaa hadda mashruuc uu caruurta S.Ogadenya ee Qaxootiga Dhadhaab ku jirta loogu dhisayo dugsiyo waxbarasho, mashaariicdaa oo hirgali doona Bisha May.
Ururka OYSU wuxuu ku faraxsan yahay inuu kala soo qaybgalo Mr. Graham Peebles shirkan lagaga hadli doono arima quseeya dhibaatooyinka xad dhaafka ah ee lagu hayo shacabka Somalida Ogadenya.
Waxaa hubaal ah qofkii danaynaya inuu wax ka ogaado arimaha xuquuqul insaanka iyo dhibaatooyinka haysta shacabka S.Ogadenya inuu ka soo qaybgali doono shirkan.
Wixii faahfaahin dheeraad ah eed u baahan tahay kala xidhiidh :
Abdifatah kariye 952-994-3131/Mohamed Jowhar 507-201-5630.
Shirka waxaa lagu qaban doonaa :
Maalinta : Saturday March 15th
Goobta :229 19th AvenueSouth Minneapolis,MN55455
(U of M Law School 25 Lockhart Hall)
waqtiga : 2:00pm to 6:00pm